Xirmo badan oo kheyraad ah: 908 + 1.973 icons oo aad ku soo dejiso bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Xirmooyinka kheyraadka: 908 + 1.973 icons si aad u soo dejiso bilaash
Lua louro | | Astaamaha, Khayraadka
Haddii aad dhahdo waligaa uma baahnid inaad ku soo darto falaar yar qaabeynta, waxaad u badan tahay inaad been sheegayso. Waana inaad aragto sida ay u murugsan tahay mararka qaar inaad hesho fallaar annaga na qancinaya, oo ku habboon mashruuceena ... Markaan ogaanona, waxaan waqti ku luminay wax yar oo noocaas ah.
Sidaas darteed waqti badan ha iskaga lumin abuurista shay horay loo abuuray, maanta waxaan kuu keenaynaa boqorrada kheyraadka. Boostada soo uruurisa ugu fiican (iyo ka sii ballaadhan) xirmooyinka astaanta bilaashka ah. Sababtoo ah haa, waxaad ku soo dejisan kartaa astaamahan bilaash oo waad la shaqeyn kartaa. Akhriso.
908 + 1.973 icons si aad u soo dejiso bilaash
Nooca Waa xirmo 250 sawir gacmeedyo gacmeed lagu farsameeyay. Markii aad soo degsato xirmada waxaad ka heli kartaa iyaga oo qayb ka ah nooca qoraalka, qaababka EPS, PDF iyo PSD. Waxaas oo dhan waxay ku hoos jiraan liisanka isticmaalka CC BY-SA 3.0. Sawir-gacmeedka waxaa nashqadeeyay Daniel bruce, hal abuur sare oo ku takhasusay ku noolaanshaha dhijitaalka ee Stockholm. Naqshadaynta webka Entypo iyo horumarinteeda waxaa fuliyay Andreas Blombäck, oo isna ku nool Stockholm.
Astaamaha Waa qayb ka mid ah 308 icons oo bilaash ah oo aad u isticmaali karto boggaaga. Waa maxay? Waxaad ubaahantahay inaad feylalka 'typicons.css' uxirato boggaaga sida lagu sharaxay tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Xirmada 'Brankic1979'. Tani waa xirmo ka kooban 350 aag oo bilaash ah oo bilaash ah oo laga soo dejisto. Sida ay ku yiraahdaan shabakadda, waxay ku habboon yihiin codsiyada, bogagga internetka ama wax kasta oo kale oo aad qiyaasi karto. Waxaadan awoodin waa inaad uqeybisaa xirmadan astaamahan ogolaansho la'aan: laakiin waxaad xor u tahay inaad u adeegsato shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba.
Waxaanan ku soo gabagabeynay boostadan kheyraad meel lagu raadinayo astaamo dheeri ah. Gudaha IconMonster waxaad ka heli doontaa 1973 icons madow iyo caddaan oo bilaash ah oo laga soo dejisto. Websaydhkan waxaad ku dhex wareegi kartaa adoo si toos ah uga raadinaya sanduuqa wada hadalka ee oranaya "Raadi" ama adigoo gujinaya astaamaha ka muuqda sanduuqa kadib. Midka hore ayaa noo soo diraya bogga hore ee IconMonster. Midda labaad waxaa loo isticmaalaa in si aan kala sooc lahayn loo tusin wax astaan ​​ah oo shabakadda ah. Ta saddexaad waxay ina tusaysaa astaamaha ugu caansan ee websaydhka. Kii ugu dambeeyayna wuxuu ina tusayaa qaybaha ay ku kala aasan yihiin astaamaha dukaankan internetka, kuwaas oo kala ah: aasaasi (aasaasi), ganacsi (ganacsi), ganacsi (ganacsi), qalab (qalab), isdhexgal (interface), noocyo kala duwan (kala duwan) , multimedia, shabakadaha (shabakad), amniga (amniga), calaamadaha (calaamadaha), bulshada iyo shabakadda.
Ma rabtaa wax intaa ka badan? La joog tan xirmo 120 astaamo bilaash ah adiga.
Macluumaad dheeraad ah - Xirmooyinka 120 astaamo bilaash ah adiga
Xigasho - Nooca, Daniel bruce, Andreas Blombäck, Astaamaha, IconMonster, Sannadku markuu ahaa 1979
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha » Xirmooyinka kheyraadka: 908 + 1.973 icons si aad u soo dejiso bilaash
5 Casharro Photoshop ah si loo kordhiyo xirfadahaaga
Khariidadaha Khariidadaha Bilaashka ah ee Dhammaan Dalalka Adduunka